Miezaka manatsara ny endriny i Ubuntu | Avy amin'ny Linux
Tsy mampiasa aho Ubuntu Noho ny antony maro samihafa izay tsy misy ifandraisany ankehitriny, ary na dia nandray fanapahan-kevitra somary nampiady hevitra aza izy ireo indraindray, dia tsy azoko atao ny tsy hanaiky fa mendrika ny tehaka tampoka izy ireo indraindray.
raha toa, Ubuntu Mampiahiahy momba ny zavatra niainan'ny mpampiasa izy ireo ary nampiditra andiana fanovana maro izay tiako indrindra farafaharatsiny. Betsaka no mety efa mahalala izay lazaiko, saingy tsara ny manasongadina.
1 Varavarankely tsy misy sisin-tany
2 Desktop Background vaovao
3 Efijery hidin-trano vaovao
4 Ho famintinana
Varavarankely tsy misy sisin-tany
Averiko ihany, tsy mampiasa aho Ubuntu saingy tsy maintsy lazaiko hoe: Misaotra, misaotra betsaka… Tsy fantatro ny momba anao saingy narary ireo sisiny kely mazava teo amin'ny varavarankely Ubuntu ireo. Nisy nahatsikaritra an'io ary nahitsy ny olana ary ny vokany dia averiko indray fa tiako io.
Ambiansy miaraka amin'ny sisin'ny fikandrana
Ambianceless Ambiance amin'ny Windows
Iray amin'ireo zavatra tiako io oksizenina en KDE, ahafahantsika manitsy ny sisin'ny varavarankely araka izay itiavantsika azy. Ary tsy miteny an-karihary aho, ho an'ny firaketana an-tsoratra, ary tsy mikasa ny hampitaha azy ireo, ho an'ny fahalalan'ny tsirairay fotsiny no ilazako azy.
Desktop Background vaovao
Manaiky ianao amiko fa ny iray amin'ireo zava-dehibe manova antsika rehefa mametraka Rafitra miasa isika, na inona izany na inona, dia ny Desktop Background.
Heveriko fa tamin'ity indray mitoraka ity, ity no fotoana voalohany nahalasa ahy nandritra ny herinandro maromaro ny default Ubuntu Desktop Background, raha sanatria ka nampiasaiko, mazava ho azy.
Tandremo anefa, aza mieritreritra ny hahita paleta loko vaovao. Araka ny tenin'i Michal Izydorczyk, iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa Ubuntu Design, iray amin'ireo zavatra ekena rehefa apetraka i Ubuntu dia ny Desktop Background.
"Nandritra ny roa herinandro lasa izay dia niasa tamin'ny Ubuntu Wallpaper vaovao izahay. Nanjary ampahany lehibe tamin'ny marika Ubuntu izy io, ny loko mahery sy ny gradients dia singa matanjaka sy manan-danja. Tsapanay fa rehefa mijery ny solosainan'ny olona iray dia tena mikiakiaka UBUNTU izy io. "
Noho izany, na dia somary matotra sy kanto kokoa aza aho amin'ity indray mitoraka ity, dia hitohy ny fahitana ny toe-tsaina sy ny foto-kevitr'ireo teo aloha ihany.
ny Taratasy fiasan'ny vondrom-piarahamonina tsara tarehy ihany koa izy ireo amin'ny tranga maro, ary azontsika atao ny misintona azy ireo avy Launchpad hizaha toetra azy ireo.
Efijery hidin-trano vaovao
Na dia tsy fanovana aza ny fandefasana balafomanga, ary tsy heveriko ho misy dikany izany, ny efijery fanidiana vaovao dia mahazo fampifangaroana eo amin'ny lafiny fisehoana amin'ny efijery fidirana. Tsotra sy kanto.
Raha fintinina, mba tsy hititatra lava kokoa ity lahatsoratra ity dia heveriko fa avy any ry zalahy Ubuntu eo amin'ny lalana tena tsara izy ireo. Amin'ny farany, araka ny filazan'izy ireo, izay tsy miditra amin'ny maso, dia tsy miditra na aiza na aiza ary tsara fa miraharaha ny fanomezana traikefa nahafinaritra ho an'ireo mpampiasa vaovao sy taloha izy ireo.
Tsy fantatro raha maro aminareo no mahatadidy izany, fa ny tena fiovana tamin'ny sangan'asa dia inona izany Ubuntu Nampanantena foana izy ary niandry ireo mpampiasa, ary efa hitantsika izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Miezaka manatsara ny endriny i Ubuntu
52 hevitra, avelao ny anao
Ho an'ireo mpampiasa vaovao dia heveriko fa lafo vidy ity
pow dia hoy izy:
Ary ny fonosana kisary vaovao? hany ka vinavinaina ho vonona ho amin'ity kinova ity -.-
Mamaly an'i pow
Tsy zavatra tsotra loatra ny manao azy, toy ny te-ho maika haingana ry zalahy izay miandraikitra ny asan'ny plasma ankehitriny, tsy hainao akory hoe firy ny sary masina ao anaty rafitra iray, tsy ny sary famantarana fampiharana fotsiny fa ny myme- karazana kisary, ireo tari-dalana, ankoatry ny maro hafa.
Ary tsy maintsy manao kisary amin'ny habe ianao hatramin'ny 22 ka hatramin'ny 48 teboka (mazava ho azy fa tsy ny refy rehetra) ary azo ovaina.
Eny, tena sarotra izany ka izany no antony mahatonga ireo mpamorona maro hamoaka ny fonosany ho azy manokana, miaraka amin'ireo PPA-dry zareo hametraka azy ireo mivantana amin'ny terminal any Ubuntu. : /
Tena vitsy ny feno. Na izany na tsy izany, araka ny nolazain'i pandev92, ireo ubuntu dia maharitra ela kokoa noho ny nolazainy fa mety.
Manome ahy izy ireo fa homeny anao izy ireo amin'ny 16.04 XD…., Rehefa misy zavatra ampanantenain'ny ubuntu, ampio roa taona amin'ilay daty nampanantenainy xd
Mety hiseho ao amin'ny Beta voalohany miaraka amin'ny Unity izy ireo, izay hivoaka amin'ny 27 martsa. Heveriko fa toy izany no fanaovan'izy ireo izany noho ny antony "marketing".
Tiako ny zava-drehetra, izao dia mila sary masina vaovao fotsiny aho. 🙂
Indraindray aho mamaky fanehoan-kevitra ratsy momba an'i Ubuntu… manaitra ahy ny fiovan'ny izao tontolo izao. Tsy milaza aho hoe io dia fidirana hanohitra an'i Ubuntu ary tsy misy ifandraisany izany, saingy nataonao mazava tsara fa tsy ampiasainao izany. Mazava be. Ny tiana holazaina dia hoe Ubuntu ho fizarana dia manana tombony lehibe ary tsy tian'izany ny vondrom-piarahamonina hipster. Izany no antony nijanonany tamin'ny fampiasana azy ireo. Eny, fantatro fa mankahala azy ireo koa i Richard Stallman ary nanambara ampahibemaso ny tsy fankasitrahany an'ity fizarana ity. Fantatro ihany koa fa ny Ubuntu dia manana zavatra sasany izay azo heverina ho adware / malware na izay tianao hiantsoana azy. Amin'ireo tsara sy ratsy rehetra mety ananan'i Ubuntu dia mbola fizarana iray ihany izy io, azo ampifanarahina amin'ny hafa ihany ary ahafahanao misafidy izay tianao sy izay tsy tianao hampiasaina. Tsia? Ka maninona aho no mampiasa kinova 12.04 an'ny Ubuntu raha tsy misy Unity sy miaraka amin'ny Openbox? Azo atao toy ny amin'ny fizarana hafa ihany izany. Fa maninona no nofidiko io? Tsotra: Te hanana fizarana marimaritra iraisana izay ahazoako miditra amin'ny ankamaroan'ny fitaovana omen'ny Linux antsika ao amin'ny trano fitahirizam-panjakana ary mino aho fa i Ubuntu no tena mahafeno ny ankamaroan'ireo filàna ireo. Ankizy hipster androany tsy tia Ubuntu satria mihaino sy mamaky zavatra mahatsiravina izy ireo, satria tsy tian'izy ireo ny Unity, satria manana malware izany, satria nilaza i Richard fa tsy hampiasa azy io ary na iza na iza nampiasa azy dia horoahina hiala amin'ny club liberté-ny. mandritra ny androm-piainana, mandefa azy ireo any amin'ny lafiny hafahafa izay itenenan'ireo loholona amin'ny Internet ny antso an-tariby ary tsy afaka miditra amin'ny latinchat fotsiny izy ireo (toa tsy dia maninona izany) Fa ny tena marina dia izay no maha-izy azy: fahalalahana. Canonical dia nanao birao birao. Tsy tianao? Aza mampiasa azy. Moa ve ianao sahirana amin'ny malware izay misy ao anatin'ny biraonao? Esory izy ireo na ampiasao ny kinova "farafahakeliny" ary avy ao ireo faritra handaminana azy. Mora izany. Ny fanipazana loto ao amin'ny tarehin'i Canonical no mahatonga antsika hanimba ny fahalalahana sarobidy izay arovantsika be (tokony hotadidintsika koa fa misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny loharano misokatra sy ny rindrambaiko malalaka; loharano misokatra ny Ubuntu). Tsy tokony hitsara aho ary hampiasa izay tadiaviny ny tsirairay, fa ny fitoniana an'ity rafitra ity izay malaza be amin'ny tontolon'ny Linux sy ny fampiasana azy io dia mahatonga an'i Linux hanana toerana lehibe kokoa amin'ny sari-tany ary mieritreritra aho fa tokony hankasitraka azy rehetra isika. Amin'ny zavatra rehetra nataon'izy ireo, ahoana raha miaraka amin'i Amazon ary tsy fantatro izay zavatra hafa, mieritreritra ve ianao fa tsy mila sorona kely hahatratra izay tianao ho tratrarina? Farafaharatsiny mba hendry ireo namana Ubuntu namela antsika safidy hamono, hamono na hamongotra ireo safidy ireo izay manelingelina antsika toy ny soso-kevitra avy amin'ny amazon, fivarotana mozika sns. Ny fahalalahana no safidy tokony hataontsika rehetra amin'izay tiantsika amin'ny rafitray ary heveriko fa, ivelan'ny Unity, amin'ny ankapobeny dia mbola hajaina ao amin'ny Ubuntu izy io.
Raha mieritreritra ianao fa zaza Hipster aho dia diso ny olona azonao. Nampiasa ny GNU / Linux aho nandritra ny 7 taona, ny roa nampiasako ny Ubuntu ary manana antony marobe hieritreretana tsara na diso aho raha ilaina.
Heveriko fa ity lahatsoratra ity, lavitra ny fanipazana loto amin'ny tavan'i Canonical, ny zavatra ataony dia ny manome ny hevitro ny Ubuntu. Ary eny, ao amin'ny fanehoan-kevitra nataonao dia nolazainao ny sasany amin'ireo zavatra mankahala ny olona / tiany momba an'i Ubuntu, saingy tsy hitanao ny zava-dehibe indrindra ho ahy: TSY TIA ITY fotsiny aho.
Imbetsaka aho no nilaza an'io, Unity dia toa tsara amiko amin'ny lafiny maro, saingy tsy tiako amin'ny hafa izany. Ary tsy noho ny Unity no antony tsy ampiasako ny Ubuntu, ny mifanohitra amin'izay dia heveriko fa iray amin'ireo zavatra hampiasako azy io.
Ka azafady Darko, mieritreritra an'io aho alohan'ny hiampangana olona ho Hipster, ary noho izany tsy mampiasa Ubuntu, satria tsy fantatrao ny antony sy ny antony manosika ny tsirairay.
Azafady, elav, fa tsy Hipster no lazaiko ho anao na ho an'iza manokana satria tsy misy fantatro. Ny tiako hatao dia ny mitsikera ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny satria raha misy tsy mety ao aminay dia mitsikera izay rehetra tsy tianay fotsiny satria, indrindra ireo mpampiasa Ubuntu. Eny, lazainao amin'ny asa soratanao ary ataonao mazava tsara fa tsy mampiasa Ubuntu ianao ary na iza na iza mamaky azy dia mety hieritreritra fa zavatra ratsy ny fampiasana azy, ary tsy noho ny nolazainao fa ampiasainao na tsia fa noho ny fomba fampiasanao lazao ary avereno avereno, fa fiheverana diso iray ihany no azoko na ny mpamaky rehetra. Ny fanamarihako dia tsy hitsikerana anao satria tsy badmouthing Ubuntu akory ianao; Tsy fikasana koa ny miampanga anao na olon-kafa, fa araka ny filazan'izy ireo ao amin'ny nosy malalako mampihoron-koditra (tiako holazaina fa manintona) "Izay mangidihidy dia satria mihinana sakay." Averiko ihany, tsy nisy nolazaiko (na ny Hipster) nolazaina ho anao, na ho an'ireo mpanoratra an'ity bilaogy ity izay tsidihako isan'andro na ho an'ny olona manokana. Inona koa, noheveriko fa izaho no ho voalohany hevitra satria rehefa niditra sy namaky aho dia tsy nisy, ka tsy nilaza izany aho noho ny hevitra hafa novakiako talohan'ny nandefasako ny hevitro. Nieritreritra aho fa afaka milaza izay eritreretiko, satria saika tsy vitako mihitsy, ary angamba misy mahay mamaky ary manana fomba fijery mitovy na hafa, sns, izay azoko zaraina ihany koa; Tsy fikasako mihitsy ny hitsara olona, ​​ny mifanohitra amin'izay dia tokony hanana fahalalahana hampiasa izay tiany ny tsirairay.
Manana ny fahafahanao maneho ny zavatra tadiavinao ianao, tsy ho hita intsony izany, fa indraindray kosa ilaina ny mamaky hatrany hatrany izay soratantsika alohan'ny hamoahana hevitra, satria mety hadika vilana ny teninay.
Tsy voatsindrona aho, fa ity ampahany amin'ny fanehoan-kevitra ity dia, hoy ianao:
Tsy milaza aho hoe fidirana amin'ny fanoherana an'i Ubuntu izany ary eo anilan'izay, fa nataonao mazava tsara fa tsy ampiasainao izany. Mazava be.
Tsy misy ifandraisany amin'ny lahatsoratra izany, satria na mampiasa Ubuntu aho na tsia, amin'ity tranga ity dia tsy misy ifandraisany izany, satria ny tanjon'ny lahatsoratro dia ny manondro fa manao zavatra tsara izy ireo.
Na izany aza, averiko ihany, tsy mieritreritra aho fa mpampiasa maro no mijanona tsy mampiasa Ubuntu ho Hipster, na mpampiasa an'ity Community ity na tsia.
Elav, tsy mino aho fa "niampanga" anao na inona na inona i Darko, hevitra hafa toa anao io. Efa ela aho no nanaraka an'ity bilaogy ity, ary hitako tsara fa ny ankamaroan'ny atiny dia manohitra ny ubuntu, izany no fahitako azy, na dia mamaky azy isan'andro aza aho satria hitako fa mahaliana, nefa miombon-kevitra amin'i Darko aho, tsy manome aho Raha heveriko fa tsy mila ny fanehoan-kevitra ratsy aho, tsy fonosina mikatona ny Ubuntu, azontsika avela araka izay itiavantsika azy, toy ny distro hafa ihany koa, fantatro fa tsy tianao izany, saingy ilaina ve ny mamerina azy io be?
Toa ny fomba nametrahany ny heviny, araka ny nolazaiko tao amin'ilay hevitra etsy ambony, no nahavaly ahy. Ara-dalàna raha ato amin'ity bilaogy ity, toy ny amin'ireo olona an-jatony maro, ny olona mikarokaroka amin'ny Ubuntu, saingy tsy izany no zava-misy amin'ity lahatsoratra ity, izay tiako fotsiny no ataoko.
Misaotra nijanona ary nanome hevitra
anti ubuntu? raha sahirana ianao miresaka momba ny ubuntu eto.
Izaho dia nampiasa Linux nandritra ny 12 taona sy ubuntu hatramin'ny nisehoany (4.10), ary azoko tsara izay lazainao, tamin'ny voalohany dia i Debian fotsiny ny ubuntu miaraka amin'ireo rindranasa sy toerana misy anao ao anaty CD (iso), ary tsara izany satria naka distro tsara ry zareo ary nahatonga azy ireo ho azon'ny mpampiasa kokoa.
Taty aoriana, rehefa nijanona niantehitra tamin'i Debian aho ary lasa fampandrosoana mahaleo tena dia tsara tokoa, satria nifantoka tamin'ny mpampiasa izy ireo, namela distro sariaka kokoa, saingy amin'ireo zavatra izay tsy tian'ny ankamaroan'ny "nentin-drazana" dia tadidiko ihany rehefa nitaraina momba ny UI momba ny fikirakirana, nilaza fa tsy ilaina izany satria natao tamin'ny console, tadidiko ny vitsivitsy izay nitaraina momba ny repositories nilaza fa tsy nilaina izany satria miaraka amin'ny kaody loharano dia ampy izany.
Ary hatramin'ny fisehoan'ny firaisankina, maro ireo mitaraina momba ny toetra mampiavaka azy izay ahafahan'ny canonical manangona angon-drakitra sasany avy amin'ireo mpampiasa, ny sasany kosa mitaraina momba ny tontolo mavesatra amin'ny habetsaky ny loharanom-bola laniny, ao anatin'ity farany ity dia ampidiriko ny tenako, saingy fantatro izany azo hamarinina.
fa amin'ny farany dia mitaraina amin'ny Ubuntu ny mpampiasa dia noho ny safidy vitsivitsy ananan'ny mpampiasa tsy manam-pahaizana, ary holazaiko fa tsara raha afaka misafidy izay "fampindram-bola" hiasa na tsia, izany amin'ny fomba mora mpampiasa rehetra, Na inona na inona haavon'ny traikefanao, azonao atao ny misafidy ireo fampindramambola miasa amin'ny firaisan-kina, ary koa zavatra hafa ao anatin'ny Ubuntu.
Raha ny tena izy dia tena tsotra izany, azonao atao ny misafidy azy ireo amin'ny dash / plugin (na zavatra toa izany .. izao tsy tadidiko)… fa «ampindrana» an'arivony maro ahahahaha, ary ny fanafoanana ny tanana tsirairay dia fanaintainan'ny… …… .. Mety ho nametraka zavatra toa ny "te-hampindrana trosa ... bla bla" izy ireo ary sokajy sasany, amin'ny farany dia mety hisy ny fampindram-bola tadiavin'ny olona iray ... vitsy angamba.
Mizarako tanteraka ny hevitrao. Fa manelingelina tokoa ny fanesoranao ... ny damn amazon, sns. toy ny vazivazy ratsy izany, tena tsy fahita firy ny mahita izany ao amin'ny rafitra fiasa izay nipoitra be teo amin'ny tontolon'ny linux.
Fa eny, misy tsikera miely amin'ny Ubuntu, ary avy amin'izany dia sitrana tsikelikely aho. Nanalavitra an'io aho ary mieritreritra fa tsy ho ratsy loatra ho an'ny kahie 😛
Ary ambonin'izany rehetra izany, amin'ny fifanarahana feno izay nanokatra varavarana ho an'ny olona maro i Ubuntu.
Manemotra ny MIR indray ny Ubuntu.
Tsy mangorakoraka aho, ny telefaona nomen'izy ireo mba hanamarihana ary asehony ahy fa mihazakazaka amin'ny wayland izy ary tsy nilaza zavatra xD taminy izy ireo ary ankehitriny ho an'ny renim-pianakaviana nahagaga 14.04! Mbola tsy azontsika tsara ny momba ilay mir xD [yaoming]
Wayland dia protokolota. Toa nilaza ireo mpamorona ubuntu fa tsy ho sarotra izany raha manova ny Mir mba hampiasa ny protokol Wayland.
Hahahaha .. +1 .. ..Mieritreritra aho fa misy vitsivitsy manantena an'io valiny io .. xP
tsy misy lesoka vita amin'ny Linux ...
- «… ary ity no distro vaovao 14.04» -
- «fa hitako fa adinonao ny mampiditra ny sisin'ny varavarankely» -
- «Um ... ... tsia, io no endrika vaovao, minimalist ary maoderina kokoa ...» -
ubuntu dia miezaka manatsara ny fisehony
Star Artemio dia hoy izy:
Miombon-kevitra aminao aho, tena misy fiovana miharihary izy ireo, hitanao izy ireo ary hoy ianao hoe "naninona izy ireo no tsy nanao an'io".
Tiako izy ireo, manampy ny fahamendrehana amin'ny birao izy ireo, manome endrika fa ny zavatra rehetra dia mifangaro kokoa, mahatsapa minimalist ary hazavana aza. Azo antoka fa momba ny fisehoana manokana sy ny fahitana manokana izany.
Napetrako tao anaty fizarazarana andrana io ary io no ampiasaiko hilalaovana, satria niasa ny karatra ATI ahy nefa tsy nila mpamily tompony akory.
Valiny tamin'i Artemio Estrella
Fenriz dia hoy izy:
Tsy vaovao io, ao Canaima4 no ampiharana azy.
Valiny tamin'i Fenriz
Ianao irery no nahatsikaritra ireo sisiny ireo. Raha mijery aho dia zara raha mahita fahasamihafana. Heveriko fa ny alokaloka kely izay, raha ny marina, dia toa tsara tarehy (ary mbola hitako ny antony mbola anisany.)
Angamba .. Izy io dia ny fijeriko be dia be an'ireo andinindininy kely ireo, zavatra iray izay hain'ny OS X fantany ny fomba hanaovana tsara azy, izany no mahatonga azy ireo handroso tokoa amin'ity raharaha ity
Tsia, andraso, efa nahatsikaritra aho. Wow, na ny sary tsirairay aza dia misy fanamafisana hanasongadinana azy. Mahagaga fa kely fotsiny ny saina no jereko rehefa mijery aho. : S
Marina ny anao, toa ratsy tarehy izy, nefa tsy dia hita loatra. Raha tsy mikasa ny hijery azy ianao dia mety tsy ho takatrao akory fa eo izy.
Etsy ankilany, nesorin'izy ireo ihany koa ny aloka tamin'ny zoro ary ankehitriny ny varavarankely tsy misy alokaloka ary ny bara ambony misy alokaloka mbola mifandona.
Tiako ny fiovana, nampiasa ubuntu aho taloha, tsy nitovy nandritra ny fotoana fohy ny nampiasako ilay Salamander vaovao ary mahafinaritra izany: 3
Tsy hitako izay mahasamihafa ny tsy misy fetra sy ny tsy manam-petra ary ny sary dia kely loatra ka tsy mankasitraka na inona na inona.
Misy olona manazava amiko tsara kokoa momba ny sisiny…. : - /
kaoi97 dia hoy izy:
"Re professional", ny namana iray dia hilaza fa avela ho azy ireo ity LTS ity ary tsy natao ho kely fotsiny amin'ny fiheverana ny maha-zava-dehibe an'ity kinova ity. Farafaharatsiny amin'ny tontolo iainako dia hitako fa manintona ny sain'ny mpampiasa iraisana sy ny "olana na dia hamono ny solosainy" aza i Ubuntu amin'ny fahatongavan'i Metro ao Windows 8
Mamaly an'i kAoi97
cex dia hoy izy:
Jereo ny fanitarana. Ireo boaty eo amin'ny farany ambany ankavanan'ny pikantsary tsirairay. Eo an-tampon'ny ianao dia afaka mahita sisin-tany fotsy. Ao amin'ilay iray eto ambany dia tsy eo intsony.
Ny zavatra nataon'izy ireo dia ny manala ny sisiny avy eo amin'ny sisiny ankavanan'ny, havia sy ambany amin'ny varavarankely. Ny bara misy ny lohateny ihany no sisa tavela ho haingon-trano (rehefa antsoin'izy ireo fa ireo takelaka ireo) ny fikandrana.
Mamaly an'i Cex
Ny valin-teniko teo aloha dia valiny ho an'i Yoyo.
Chow dia hoy izy:
Tena tsara, raha ny fahitako azy dia toa tsara miaraka amin'ireo fanatsarana ireo.
Mamaly an'i Chow
Tena tsara, ho ahy ity dia iray amin'ireo teboka matanjaka ao amin'ny Ubuntu. Na dia tiako aza ny Linux, dia maimbo ahy matetika ireo endriny izay maimbo ahy, satria miharihary izany satria ireo olona mivoatra (indrindra ny GNU) dia tsy mahalala momba ny famolavolana, ary tsy manana ny antony. Saingy hitako fa tsara ny fizarana fizarana sasany manoloana an'io lohahevitra io.
Misy olona maka ambadika birao lalandava miaraka amin'ireny tonony ireny sy ilay biby mampiavaka ilay kinova ... Ny andro izay isaky ny kinova vaovao dia mipoitra ny solontenan'ny birao izay misolo tena ny kinova tsirairay dia hametraka ubuntu amin'ny masinina virtoaly fotsiny aho hahitako ny endriny mahafatifaty 🙂
Hanova zavatra hafa aho, toy ny solomaso marani-tsaina mitady izay mivoaka avy amin'ilay kaody - mazàna tsy mifanaraka amin'ny zavatra tadiavinao izy ireo - ary raha ny momba ny fiaorna birao, tiako izy ireo miaraka amin'ny loko izay tsy mamela anao ho jamba - manala fotsy sy derivatives, ary tsy misy sary na zavatra hafa toa izany. Ary ambonin'izany rehetra izany, ny FAHATONDRANA sy ny fahombiazan'ny tsy misy an'ireo toerana roa ireo dia efa azon'izy ireo atao ny mandeha araka izay tadiaviny, fa tsy hanakaiky an'i Ubuntu akory aho.
Izany, fuhh, lavitra.
Tokony hanatsara ny fifandanjana amin'ireo karatra sary ATI izy ireo, satria raha ny hevitro rehefa apetrakao ao anaty windows ny ataoko graphics dia mandeha haingana izy io, fa rehefa apetrako ao Ubuntu dia lasa miadana be izy io amin'ny fomba lazain'ny olona fa Toa tsy dia maika loatra ny GNU / Linux, manantona ny varavarankeliko mihitsy aho, noho izany antony nijanonako tsy nampiasa ubuntu, nifankahazo tsara tamin'ny debian aho, tsy dia nasiana pereque firy raha ny fametrahana ny sary ATI no resahina. fa raha toa ka mahafinaritra sy mahaliana ahy ny lohahevitra ubuntu.
Tsy mampiasa Ubuntu aho fa hevitra tsara dia tsara ny nanesorana ireo sisin-tany, mampiasa Openbox manokana aho ary mampiasa azy io tsy misy sisintany satria manome azy io hikasika tsara kokoa> http://i.imgur.com/UxHTYXz.png fa amin'ny farany ny tsirairay manapa-kevitra raha misy na tsia:]
Mamaly an'i algabe
obedlink dia hoy izy:
Ny tiako hatao dia ny hitovizan'ny menio manerantany amin'ny Mac, fa rehefa mifantoka amin'ny rindranasa dia hita foana ny menus.
Ny zavatra iray hafa tsy tiako dia ny fanjavonan'ny anaran'ny fampiharana sy ny menus.
Valio ny obedlink
Nisintona ny zava-nisy aho andro vitsivitsy lasa izay, ary tiako izany. Mampihomehy fa tiako ny fiaviana misy anao Ubuntu (miaraka amin'ny loko volomparasy sy izany rehetra izany) ka napetrako teo no ho eo izy ireo, ary navelako teo nandritra ny fotoana ela izy ireo. Manana izany minimalism mangatsiatsiaka izany ianao.
"Ny fankahalana Ubuntu dia tena be mpampiasa"
Alexander Hernandez H. dia hoy izy:
Raha misy zavatra te-hiova ao amin'ny Ubuntu, dia ny hanomezan'izy ireo safidy hanova ny sarin'ny Unity Bar araka ny sitrapony satria mamela azy ireo hihena ho 32 izy ireo ary mieritreritra aho fa ny kely kokoa dia hiasa bebe kokoa. Amin'ny sisa tsy ananako fanoherana.
Valiny tamin'i Alejandro Hernández H.
Mahatratra 16 ve? 😀
Fedorian dia hoy izy:
Ny kanto sy "matihanina" dia fitsarana ny zava-misy iainantsika mifototra amin'ny fitsarana an-tendrony.
Mamorona OS mandaka 1000 manerana ny olon-drehetra, ary ny lohahevitra sy sary masina ampiasain'izy ireo dia heverin'ny olona ho "matihanina."
Vitsy dia vitsy ny olona nitaraina (ny sasany nahazo fahazavana) momba ny olana XP, ary tena tsy nitovy tamin'ny hitantsika ankehitriny. Nisy ny marimaritra iraisana fa tsara ny XP dia tsara koa ireo sary masina. Raha saro-kenatra io, dia ho setroka ny lohahevitra.
Valiny tamin'i Fedoriano
mpandrafitra dia hoy izy:
Salama daholo, satria izaho manokana dia nampiasa Ubuntu 14.04 nandritra ny iray volana izao, tsy tadidiko ny fametrahana Ubuntu avy amin'ny 11.04, na dia 12.04 aza; fa tsy maintsy milaza aho fa nahasarika ahy ity kinova ity, mandeha tsara tokoa izy, tena mivaingana, nihatsara be ny estetika, indrindra amin'ny fihenan'ny kisary fisotroana ho an'ny habe 16, tsy dia mampihoron-koditra intsony izy io, ary ny zavatra tsara indrindra dia ny na dia tsy izany aza dia io no kinova farany, tsara kokoa noho ny 12.04 tamin'ny fotoana nivoahany voalohany, heveriko fa ho an'ireo manelingelina ny Unity (mihevitra ny tenako ao amin'izy ireo aho) miaraka amin'ny 14.04 dia fotoana mety hisintonana izao, ny tontolo iainana mahafinaritra, tsiranoka, marin-toerana ary miaraka amin'ny tombony rehetra Ubuntu izay fantatsika rehetra.
Nijaly tamin'ny GNU + Linux aho nandritra ny 10 taona ary ny Ubuntu 14.04 no rafitra fiasa GNU + Linux voalohany izay tena manao izay tokony ho izy (ho an'ny tanjona tadiaviny): MIASA IT. Tsy manelingelina ny fampiasanao ny masinina isan'andro fa kosa miaraka aminao amin'ny lahasa tsirairay. Ary, na dia hafahafa be aza ny zavatra holazaiko, maro no tsy matoky rehefa mamaky ahy: NY FITIAVANA FAMPANDROSOANA dia TSY MISY MITONGA! Oh, ary tena haingana !! Mampahatsiahy ahy izany rehefa nampiasa Arch + Musca 😀 aho
Fanontaniana roa lehibe izay tavela amin'ity lahatsoratra ity:
1. ny fahafahan'ny fampidirana ireo menus fampiharana ho an'ny rindrambaiko fitaratra fampiharana dia mpanakalo lalao mampihomehy, fahagagana amin'ny fahaizany miasa ary azo ampiharina.
2. Rehefa avy nanontany be dia be izy ireo dia naverin'izy ireo ny fihenan'ny minisiteran'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny tsindrio ny kisary!
Mety, tamin'ity indray mitoraka ity, ny 14.04 dia famoahana tena tsara 😀
(Raha sanatria mandondona amin'ny hazo aho ...)
Manantena aho fa ireo fanovana ireo dia hitondra olona maro kokoa amin'ny tontolon'ny gnu / linux.
tsara lavitra noho ny ubuntu ity http://www.noobslab.com/2014/04/deepin-2014-alpha-has-been-released-for.html
Mamaly an'i hernan
GNU / Linux ary Gambas3 mandeha amin'ny Windows